National Ụlọ ihe nkiri nke Manuel Bonilla, Manuel Bonilla National Theater - Tegucigalpa
North America Honduras Tegucigalpa
National Theater nke Manuel Bonilla
Adreesị: Calle la Concordia, Tegucigalpa, Honduras
Ọtụtụ afọ a rụrụ: 1905-1915.
Ndị na-ede akwụkwọ: M. Bourgueois, Cristóbal Prats Fonellosa
Na isi obodo nke Honduras ị ga-ahụ ọtụtụ ebe dị iche iche dị iche iche nke ihe owuwu na nkà, ma National Theater nke Manuel Bonilla nwere ebe pụrụ iche n'ime ha. Ọ dị na akụkọ ihe mere eme nke Tegucigalpa, nke dị n'akụkụ ndịda nke obere ọhịa Park-Herrera.
Akụkọ banyere okike
E megheere ndị nleta National Theater nke Manuel Bonilla na 1915, n'oge ọchịchị nke President Francisco Bertrand. Ihe ngosi a bụ Ateni-Comique Theater na Paris, mana ekele maka ọrụ nke onye Catalan architect Cristobal Pratz Foneloz na ihe osise nke onye na-ese ihe si Honduras , Carlos Zúñiga Figueroa, ụlọ ahụ nwere akụkụ pụrụ iche ma pụta ìhè n'ụzọ doro anya na ihe owuwu nke obodo ahụ.
Echiche dị iche iche nke ịmepụta ihe nkiri ebe a bụ nke ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta nke ndị amateur si ụwa nke akwụkwọ na nkà. Ha guzobere kọmitii na 1905 jụrụ Manuel Bonilla ịmepụta ụlọ ihe nkiri na isi obodo ahụ maka asọpụrụ onye edemede Spanish bụ Miguel de Cervantes, bụ onye ihe a na-apụghị ichefu echefu "Don Quixote" dị afọ 300. Site na iwu iwu iwu iwu malitere na Eprel 4, 1905 ma nọrọ afọ 10.
Olee ihe na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịhụ na ihe nkiri nke Manuel Bonilla?
Ọtụtụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, a loggia, ụlọ ahịa na ebe obibi na-agba akaebe maka iche iche nke ụlọ ahụ. A na-eji nkume pink, nke a na-emepụta nke ndị na-emepụta ihe na-emepụta ụlọ ahụ, na-eme ka ọnụ ụlọ ndị ahụ dị mma na Honduras. Otutu ngwaọrụ nhiere - oriọna iri na asatọ, okpukpu ọkụ 14, nakwa 5 ndị ​​na-asọ oyi na-atụ anya na tebụl na mbadamba oriọna Murano.
Maka ọdịdị ya niile, ụlọ nke National Theater nke Manuel Bonilla emeela ọtụtụ nhazigharị iji nabata ndị ọbịa ya mgbe nile n'ụzọ ememe.
Ọtụtụ ìgwè ndị na-eme egwuregwu na-emekarị n'okporo ámá na ebe a na Francisco Morazán.
Enweela ihe karịrị 10 puku egwu, ihe ngosi egwu na opera na ihe ngosi ahụ n'onwe ya. A na-enwekarị ihe omume dị iche iche ebe a, dịka ọmụmaatụ, inye ndị ahịa sayensị, ndị ọkpụkpọ na akwụkwọ akwụkwọ onyinye kwa afọ.
Ị nwere ike ịgagharị Tegucigalpa site na igafe ọha ma ọ bụ site na tagzi. Ụlọ ihe nkiri ahụ bụ nkeji 15 site na isi obodo obodo, Plaza Morazan.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgbazite ụgbọ ala, mgbe ị na-agagharị na nhazi nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri, ị ga-enwe ike iru National Ụlọ ihe nkiri ahụ site n'okporo ámá nke Calle Bustamante, Blvrd Morazán na Paseo Marco Soto.
Basilica nke Sayap
Egwuregwu History of History nke Honduras
Ebe nkiri Belize City
Kedu ka esi ewelata arọ ruo afọ 12?
Ọnụ ụzọ ámá Jaffa
Ihe mmega maka ngwa ngwa ngwa ngwa
Mgwakota agwa maka achịcha
Sinusitis n'ime ụmụaka
Kuki Curd - 8 Ezi ntụziaka nke sweets si obi chiiz
Kedu ka ha si eme ememme ụbọchị ọmụmụ nke Irina Sheik na Bradley Cooper?
Foto dị na ụlọ a gbahapụrụ agbahapụ
Kedu ka esi egbusi agụụ?
Eberi azu - Ezi ntụziaka maka ịme nri dị ụtọ
Kedu ka m ga-esi gbanye otu cat n 'ụzọ?
Mgbe akụ osisi aubergines na seedlings?
Uwe oyi oyi
Kedu ihe ị ga-eyi uwe mwụda akpụkpọ anụ?
Mmiri primrose nke ehihie
Onye na-ese ihe nkiri Roman Polanski ọzọ boro ebubo na mmeko nwoke
Kedu otu esi ewere Elkar maka ọnwụ ọnwụ?
Golden Globe 2017 - uwe kacha mma site na kapeeti uhie
Skirt-tutu - onye kwesịrị ekwesị na ihe ọ ga-eyi?
Ihe na-adọrọ onwe ya mgbe ọ gafechara